Qodobo Laga Soo Saaray Shirkii Urur Goboleedka IGAD + Sawirro * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Xuseen Axmed	 On Jun 13, 2017
Waxaa Magaalada Adis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya lagu soo gaba gabeeyay Shir Madaxeedka Urur Goboleedka IGAD kaas oo maalintii shalay aheyd ka furmay dalkaasi Itoobiya.
Soomaaliya waxaa Shirkaasi u metelayay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayay,waxaana shirkaas ka soo baxay qodobo dhowr ah oo muhiim u ah Wadanka Sudanta Koonfureed.
Ilaa 24 Qodob ayaa Madaxdii ka qeyb gashay shirkaas ay ka soo saareen waxaana ugu mihiim sanaa.
1: in la qaado talaabo deg deg ah taas oo gurmad loogu sameynayo dadka ay saameeyeen dagaalada ee ku nool dalka Sudanta Koonfureed.
2: Baaq loo diray Kooxaha Mucaaradka taas oo ku aadan in ay qaataan xabad joojin rasmi ah islamarkaana ay u hoggaansamaan Warkii ka soo baxay Madaxweynaha dalkaas.
Masuuliyiintii ka qeyb gashay shirkaas ayaa dhamaantood waxa ay sheegeen in ay muhim tahay in ilgaar ah lagu hayo dhibaatada ka taagan Sudanta Koonfureed taas oo ay dhibaato ka soo gaarto dadka Shacabka ah ee dushooda lagu dagaalamay.
Sanadii 2016 Bishii Jun ayaa waxaa heshiis wada gaaray hoggaamiyaha Mucaaradka dalkaas iyo Reik Machar, iyo Madaxweynaha sudanta Koonfureed Salva Kiir balse uu markii dambe burburay.